ISan Fermín de los Navarros kunye necawa yayo | Bezzia
USusana godoy | 17/06/2022 12:00 | Uhambo
Xa sithetha ngeSan Fermín de los Navarros, ngoko kufuneka sikhankanye iCawa. Ngenxa yokuba yenye yeetempile eziye zabhengezwa 'njengeAsethi yeMdla yeNkcubeko', emva phaya kwiminyaka yoo-90. Ke, ukuba awukabi nalo ithuba lokuyijonga, lixesha lokuba uzivumele ukuba uthathwe. ngayo.
Yiyo loo nto siza kukuxelela ukuba ungafika njani kuyo kunye nayo yonke into odinga ukuyazi malunga necawa efana neSan Fermín de los Navarros. ngokuba ngamanye amaxesha sineendawo ezimangalisayo ezikufutshane kunokuba sinokucinga. Kubonakala ngathi le ndawo yenye yazo kwaye ngokuqinisekileyo uya kuyithanda xa unayo phambi kwakho.
1 Iphi inkonzo
2 Ufika njani eSan Fermín de los Navarros
3 imbali yebandla
Kufuneka kuthiwe icawa yaseSan Fermín de los Navarro ikwiChamberí. Esi sesinye sezithili zaseMadrid ezilungelelaniswe zibe ziindawo ezi-6 zizonke kwaye uya kuzifumana kwindawo esembindini. Yenye yeendawo apho kunokuthiwa kukho ukudibanisa okungaphezulu kobuninzi bezakhiwo. Kuba kuyo uya kubona ukuba kukho njani izakhiwo zale mihla kodwa neo-Gothic kwakunye neo-Mudejar. Indibaniselwano oya kukwazi ukufumana inyathelo ngenyathelo phakathi kwezindlu kodwa naphakathi kwezona zakhiwo zibalulekileyo zale ndawo. Ngenxa yoko, akumangalisi ukuba uninzi lwayo lubhengezwe njengezikhumbuzo zesizwe. Phakathi kwazo kukho icawe namhlanje eyinkwenkwezi kwindawo yethu kodwa nezikolo ezininzi, iindawo zokuhlala kunye nezindlu zoonongendi.
Ufika njani eSan Fermín de los Navarros
Nje ukuba ukwisikhululo seenqwelomoya nakwi-T4, uya kufika malunga nemizuzu engama-90 ngebhasi. Ewe kunjalo, ukuba ukwindawo yepaki yokonwabisa, unemizuzu engama-46 kuphela phambi kwakho. Yingakho iibhasi eziya kule ndawo ziyi-147, i-150, i-16 kunye ne-7. Nangona kufanelekile ukukhangela kwangaphambili, ukuba kukho utshintsho kwindlela yokuhamba.
Ukuba endaweni yoko ufuna ukuhamba ngololiwe, ngoko ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMadrid ukuya ecaweni kukho malunga nemizuzu engama-48. Ukusuka kwindawo ye-Alcampo kungaphezu nje kwemizuzu engama-56. Uloliwe i-C10 kunye ne-C7 ngabo abazakukusa kwindawo oya kuyo. Kakade ke, njengoko sesitshilo, maxa wambi kusenokubakho inkonzo engakumbi okanye isenokuncitshiswa yaye kube luncedo ukuhlola ucwangciso ukuze ungahlali phantsi. Iindawo zokumisa ezikufutshane kwindawo esiya kuyo yiRubén Darío, Almagro, Colón, Castellana okanye Gregorio Marañón. Ekubeni ukusuka kubo ukuya ecaweni kukho malunga nemizuzu emi-3 kuphela yokuhamba.
Kuthiwa yaqulunqwa ngokubulela kwiqela lamaNavarrese awayehlala eMadrid kwaye ayenokuzinikela okuqinileyo eSan Fermín. Ke, rhoqo nge-7 kaJulayi bahlala bedibana, ke bagqiba kwelokuba benze indawo esisigxina emva kokujikeleza amaxesha amaninzi. Ukusukela ngo-1684 kuxa bedala ibandla kodwa ayizukubakho de kube ngo-1746 xa kwakhiwa icawa yokuqala yaseNavarros xa befumana indawo yokuhlala yamanani aseMonterrey. Kakade ke, emva kwexesha elithile yadilizwa. Ngexesha elithile kamva, ngo-1886, icawa esiyaziyo namhlanje yakhiwa.. Le cawa ithatha indawo esembindini kwaye kwicala ngalinye, kukho iindawo zegadi. Kuzo iipavilion ezisecaleni zingabonwa.
Kwindawo yangaphandle, unokubona indlela isitena esiyi-protagonist, esikhokelela ekubeni sithethe ngeendleko zayo eziphantsi kodwa kunye nokwakhiwa kwayo ngokukhawuleza. Kodwa ngaphakathi kwisitayela se-gothic kuya kubakho ngoku, ene-nave ezintathu kunye ne-vault eneenkwenkwezi. Isibingelelo sikaMeyi senziwe ngenkulungwane yama-XNUMX kwaye iglasi efestileni imele idyasi yeengalo zaseNavarra. Ke, kuko konke oku nangaphezulu, lixesha lokumisa kwindawo enje. Awucingi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Uhambo » San Fermin yaseNavarrese
indibaniselwano yeentsimbi zomqala ze-H&M ongenakuphoswa